စာပေခရီးနီးသလား...(၁) | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » ဆောင်းပါး » စာပေခရီးနီးသလား...(၁)
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 2:52 PM
Posted by မိုးသက် at 2:52 PM Read more
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) March 17, 2012 at 5:06 PM
ကဗျာရေးနည်းလေး ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ...တဂ်ပိုစ်လည်း ရေးပီးကြောင်းပါ..ပေါက်ကွဲမှုလေးတော့ပါသွားဒယ်..အကာအရံလေးနဲ့ ပြေးဖတ်.ဗျို့ 
Snow May March 18, 2012 at 12:26 AM
ကဗျာရေးနည်းအကြောင်းတော်တော်သိတာပဲ.. ဗဟုသုတအဖြစ် တန်ဖိုးရှိတဲ့. ပို့စ်တစ်ပုဒ်ပါ. နောက်အပိုင်းတွေလည်း မျှော်နေပါတယ်. :)
မောင်ဘုန်း March 18, 2012 at 12:49 AM
လူငယ် တစ်ယောက် အနေ နဲ့ပျောက်ကွယ် လု ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ ကဗျာ များ အကြောင်းကို ဖော်ထုတ် ပေးတဲ့ အတွက် .... လေးစားမိပါတယ် ....
မောင်မောင် March 18, 2012 at 3:23 AM
ညီလေးရေ တော်တော်ကောင်းတယ် ဒီပို.စ်လေးက။ ကျေးဇူးပါဘဲကွာ ကဗျာရေးနည်းလေးတွေသိရသွားပြီ။
ရင်ဆူး March 18, 2012 at 3:59 AM
ညီလေးရေ မင်းစာလေးဖတ်ရတာ ကောင်းတယ်ကွာ...ကဗျာအကြောင်းတော်တော် နှံ့စပ်တာဘဲ.....ဒီလိုလေးတွေရေးတော့ ကောင်းပါတယ်....ဗဟုသုတ ရတာပေါ့..
အောင်အောင် March 18, 2012 at 10:28 AM
jasmine(တောင်ကြီး) March 19, 2012 at 12:05 AM